जिउँदो श्रीमानको मृत्यूदर्ता बनाएर श्रीमतिले सम्पत्ति आफ्नो बनाईन , कारण थाहा पाउदा जो कोहीलाई हैरान बनाउँछ ! – Nep Stok
माघ १९, २०७८ बुधबार 260
करिब २० बर्षअघि नै गाउँबाट भागेर अन्यत्र बस्दै आएका मन्सुरले भारतमा पनि बिहे गरेका छन् । उनको पहिलो श्रीमति जसले जमिनमाथि क’ब्जा ग’रे’की हुन उनको पनि पाँच वटा छोराछोरी रहेको छ । मन्सुर केही दिन अघि वैदेशिक रोजगारीबाट आएका हुन् र उनी आफूसँगै अर्की श्रीमति पनि ल्याएका छन् ।
जसको ६ वटा बालबच्चा पनि रहेको बताइएको छ । बिहे बच्चा भएपछि कमाउन भन्दै करिब २० बर्षअघि नै गाउँबाट भागेको उनकी श्रीमतिलाई उदृत गर्दै ईलाका प्रहरी कार्यालय औरहीले जनाएको छ । यद्यपी, प्रहरीमा यसको बारेमा अधिकारीक कुनै निवेदन नपरेको जनाइएको छ ।
प्रथम श्रीमतिले मन्सुर केही बर्ष नआएपछि उनको मृत्यूदर्ता बनाएर मन्सुरका भाईसँग अँशबण्डा गरी जमिन लिएको बताइएको छ । स्थानीय हदिश मियाँको छोरा रहेको मन्सुरको पहिलो श्रीमति मैमुन खातुनले गत २०६२ सालमै उनको मृत्यू भएको भनेर मृत्यूदर्ता बनाएर जग्गा जमिन लिएको बताइएको छ ।
मन्सुरको नागरिकता बनेको अनुसार उनको नागरिकता गत विं.सं. २०६३ साल भन्दाअघि नै बनेको देखिएको छ । जस अनुसार उनी गाउँबाट भागेको २० बर्ष भएको र उनी निरन्तर नआएपछि उनको नाममा मृ’त्यूदर्ता बनाएको बुझिएको छ ।
उनका भाईहरुका अनुसार, मन्सुर गाउँबाट कमाईधमाई गर्नको लागि भारत गएको र बीच बीचमा गाउँ आउने गरेको भएपनि उनकी श्रीमति मैमुनले उनको मृत्यूदर्ता बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । सो सन्दर्भमा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दिलिप साहसँग बुझन खोज्दा उनीसँग मोबाईलमा सम्पर्क हुन सकेनन् ।
Prevलासा ज्वरोका कारण कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु
Nextमन्दिरमा किन चढाइन्छ नरिवल ? यस्तो छ भ्रम र वास्तविकता
नाग देवता को दर्शन गरी 🕉️ लाइक शेयर गर्नुहोस। तपाईको दिन शुभ रहनेछ।